Buzova, susa: u-Diana Shurygina urekhoda i-albhamu solo
Lo nyaka ungabizwa ngokuphepha ngonyaka ka-Olga Buzovoy. Umlando awukhumbuli imali ephumelelayo yokwehlukana kwakho. Ngenxa yokuhlukana noDmitry Tarasov, u-Olga Buzova izinyanga ezingu-9 wakwazi ukuthola izigidi, waba ngumlingiswa odumile kakhulu wezindaba.
Kodwa-ke, u-Olga kufanele agcine izindlebe zakhe zivulekile: abancintisana bavele bathathe izithende. Futhi omunye walaba baphisana naye wayengumfana wase-Ulyanovsk Diana Shurygin. Ngenxa yokuthi udlwenguliwe, u-Diana oneminyaka engu-18 waba yinkanyezi yangempela.
I-intanethi igcwele ama-memes ne-fotozhaby no-Shurygin, imibukiso ekhulunywa kakhulu elwa namathuba okumema intombazane emoyeni, futhi i-Wikipedia isivele inekhasi layo le-girl Ulyanovsk esikoleni.
U-Diana Shurygina uzolandela ezinyathelweni zika-Olga Buzovoy
Ngesikhathi esifanayo, ukuthandwa kwabahlanganyeli bezinkulumo kuyisenzakalo sesikhashana. Ukuze uhlale uhamba, kuyadingeka ukuba uhloniphe amabhizinisi amasha we-show show. Futhi ngalesi simo asikho isizathu sokungazisebenzisi ngokuhlangenwe nakho kuka-Olga Buzovoy, ohlakaniphileyo owaphendulela inhlekelele ngokwayo ibe ngumthombo wemali engenayo, waba umculi. Okubaluleke kakhulu, amakhono okuzwakala kule ndaba, kuvela, akanalo okubaluleke kakhulu.
Ngokusho kwabangaphakathi, manje u-Diana Shurygin udala i-albhamu yakhe yomculo. Izindaba zakamuva azikaqinisekiswa ngokusemthethweni, kodwa asikho isizathu sokungathembeli umthombo oseduze ne-TV encane ye-TV.
Kungenzeka ukuthi maduzane u-Diana Shurygina uzokwazi ukuvimbela u-Olga Buzov kumculo we-Olympus, futhi esivele emhlanganweni womklomelo olandelayo we-MUZ-TV Umklomelo intombazane iyoba "ukuvulwa konyaka". Ngenhlanhla, isihloko se-Diana Shurygin sika-hit "sisezantsi", futhi abasebenzisi abalungile bewebhu sebevele bafaka isiqeshana sokuqala somculi wekusasa isikhathi eside: Yebo, kulabo abaxhasi, i-albhamu yakwa-Diana Shurygina iyinzalo-mali ezuzisa kakhulu ezokhokha ngokushesha. Ngicabanga ukuthi ubani okhiqiza izinkanyezi ozimisele ukutshala iphrojekthi entsha? Siyaqhubeka nokuqapha izindaba zakamuva namahemuhemu mayelana no-Diana Shurygin no-Olga Buzovoy, ukuze abafundi bethu bafunde ngakho konke kuqala. Siphawula ku-Zen le ndaba 👍 futhi sihlale siqaphela zonke izinkathazo nezisulu zokuhweba ibhizinisi.
UJulia Proskuryakova uqale wabonisa ubuso bendodakazi yakhe, izithombe ezintsha
ULarisa Guzeeva wesaba labo abafisa izifiso ngesipho sakhe somlingo
U-Anastasia Volochkova endlini yangasese futhi wabangela izingxoxo ezifudumele ku-Instagram
UPaulina Andreeva noFyodor Bondarchuk bahlala eSpain, isithombe
U-Alexei Vorobyov ugqoke ngesandla sesibili
Inkanyezi "Indlu-2" uNadezhda Ermakova ihlazekile ngezingubo zangaphansi zokukhangisa, isithombe
Ingabe abantu bacabanga ukuthi lesi sici siwumqondo wesifazane?
I-Uromaki nge-eel kanye ne-tobiko ebomvu
Izitsha ezinhle zezithelo namajikijolo
Izindlela zomzimba zobuhle nokuheha
Ekhoneni lembali efulethini
Ungalungiselela kanjani usuku lokuzalwa lomntwana?
Indlela yokuqinisa ubuhlobo phakathi komntwana nobaba?
Ukuhlobisa ibhodlela ngezandla zomuntu siqu
Umyeni wami walahlekelwa umsebenzi
Isitshalo sase-Indoor Tillandsia
Izinkomba zokuqothulwa kanye nezindlela zokuphatha
Okudingayo ukuze wenze kube lula ukubeletha
Izipikili ezinempilo kanye ne-manicure ekhangayo nama-gel wokwakha i-LCN
Ukudla emakilasini okufaneleka
Ukufunda ukupheka i-jelly
Ukunambitheka kwegama: ukuzinikezela ku-ballerina kanye nemfihlakalo yokubhala
Indlela yokuchitha isikhathi esihle ngamaholidi